हामी सबै घृणा स्पाम र चिसो-कलिंग ... जब सम्म हामी गर्दैन | Martech Zone
हामी सबै घृणा स्पाम र चिसो-कलिंग ... जब सम्म हामी गर्दैनौं
बिहीबार, जुन 15, 2017 शुक्रबार, जुन 16, 2017 Douglas Karr
मे १ May मा, मैले अटलान्टामा एउटा एजेन्सीबाट एक अनावश्यक ईमेल (उर्फ स्पाम) प्राप्त गरें जसले मलाई एक स्पष्टीकरणकर्ता भिडियो के हो भनेर बताउँदै थियो। मलाई थाहा थियो यो के थियो, हामीसँग छ व्याख्याकर्ता भिडियोहरूको बारेमा लेखिएको विस्तृत र हाम्रो आफ्नै केहि प्रकाशित। मैले ईमेलमा जवाफ दिएन। एक हप्ता पछि, म समान नोटको साथ अर्को ईमेल प्राप्त गर्दछु। एक हप्ता पछि, अर्को। म कि त प्रतिक्रिया छैन। चार ईमेल जुन मैले जवाफ दिएन वा लि link्कमा क्लिक गरिन।
हामीले नयाँ ग्राहकसँग काम सुरु गरेका छन र हामीले पुनर्जागरण गरिरहेकको केहि जमानतका लागि उनीहरूको ब्रान्डिंग आवश्यकताहरू ठोस पारिद्यौं। भविष्यका प्रोजेक्टहरू मध्ये एक जसलाई हामी जान्दछौं कि हामीले सामना गर्ने छौं उनीहरूका लागि एक व्याख्याकर्ता भिडियो हो। त्यसोभए, हामीले डिजाइन गरेको नयाँ जमानतमा केहि प्रतिक्रियाको प्रतिक्रिया दिँदै छु, म व्याख्याकर्ता भिडियो कम्पनीबाट अझै अर्को ईमेल प्राप्त गर्दछु।
ईमेलमा कुनै सदस्यता रद्द लिंकहरू थिएनन, न त कुनै हो द्वारा संचालित लोगोहरू ... तर म निश्चित छु कि उनले एक बिक्री ऑटोमेशन उपकरण प्रयोग गर्दै थिए। बिक्री प्रतिनिधिले ईमेलमा उनीहरूको भर्खरका कामहरूको केहि लिंकहरू सम्मिलित गरे र भने कि तिनीहरू पहिलो प्रोजेक्टमा मसँग काम गर्न छुट प्रदान गर्न चाहन्छन्। म उदाहरणको लिंकमा मेरो औंला होभर गर्दैछु केहि सेकेन्ड सोच्दै कि यो महान छ वा छैन भनेर… र मैले क्लिक गरे।
मैले क्लिक गरेको गन्तव्य एक शानदार 1-मिनेट व्याख्याकर्ता भिडियो थियो। यो पूर्ण एनिमेटेड थियो, राम्रो साउंडट्र्याक थियो, र ध्वनि प्रभावहरू पनि मिसिएका थिए। यसको गति द्रुत गतिमा हतार गरिएको थिएन र यो असाधारण गुणवत्ता हो। यो एक सम्झौता हुन सक्छ जुन मैले पास गर्नुपर्दैन त्यसैले मैले आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको जानकारीको साथ प्रतिक्रिया दिएँ र क्लिक पठाएको छ।
एक मिनेट भित्र, मेरो फोन बज्यो र यो केटा हो जसले मलाई हप्तामा एक अनावश्यक सन्देश पठाएको थियो। उसले भर्खरै केहि थप विवरणहरू पत्ता लगाउन कल्यो र उनीहरू मद्दत गर्न सक्छन् कि भनेर हेर्न उत्साहित भए। ऊ धक्काको थिएन, मलाई बन्द गर्न कोशिस गरिरहेको थिएन, र मेरो व्यापार र हाम्रा क्षमताहरूको बारेमा जान्न केहि समय खर्च गर्यो। हामीले उनलाई कुराकानी बिहान एक उद्धरणको साथ अनुमोदन गर्ने वचन दिएका थियौं।
हामी यसलाई घृणा गर्दछौं ... तर यसले काम गर्दछ!
म निश्चित छु कि म आफैंलाई ईमेल मार्केटर हुनको लागि अनलाइन कोर्रा लगाइनेछ जुन सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दछ:
जवाफ दिँदै स्प्याम
वास्तवमा अकल्पनीय र गर्दै लिंक क्लिक गर्दै स्प्याम ईमेलमा।
ठीक छ, तपाईंले मलाई पाउनुभयो तर तिमीलाई थाहा छ? यस एजेन्सीले भर्खरै एउटा नयाँ ग्राहक फेला पारेको छ जसले तिनीहरूलाई यस क्षेत्रमा भइरहेको चलिरहेको काम प्रदान गर्दछ। र मैले भर्खर एउटा अविश्वसनीय पार्टनर ल्याएको हुन सक्छ जुन हाम्रो लागि एकदम उचित मूल्यमा एनिमेसन स्केल गर्न सक्दछ। यदि म उनीहरूको लागि केवल केहि व्याख्याकर्ता भिडियोहरू गर्दैछु भने, इनाम दुबै कम्पनीहरूको लागि जोखिम भन्दा धेरै थियो।
हामी सबै चिच्याउँदछौं र चिच्याउँदछौं स्प्याम र चिसो कलहरूका बारे ... तर हामी वास्तवमै उनीहरूको प्रभावकारिताको बारे इमानदार हुनु आवश्यक छ। मार्केटिंग सबै उत्पादन, प्लेसमेन्ट, र मूल्यको बारेमा हो। यस अवस्थामा, उत्पादन भनेको मलाई चाहिने चीज हो, प्लेसमेन्ट सही ढ .्गले समय थियो, र मूल्य सही थियो।
यसको मतलब यो होइन कि म मेरा ग्राहकहरूलाई व्यक्तिहरूको बकवासलाई स्प्याम गर्न सुरू गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छु ... तर मैले व्यवसायलाई किन त्यसो गर्दछु भन्ने कुरा म बिल्कुल जान्दछु।
यो काम गर्दछ।
टैग: ईमेलबिक्री कलबिक्री ईमेलहरूस्पामअनावश्यकअप्रत्याशित बिक्री कलहरूअप्रत्याशित बिक्री ईमेल
पूर्वानुमान विश्लेषकहरूको साथ तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू बुझ्दै
म तपाईँसँग सहमत छु। यहाँ मुख्य कुरो यो हो कि अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण छ। हामी अनुसन्धान गर्न लगनशील हुनुपर्छ र हाम्रा सम्भावित खरीददारहरू बुझ्ने। मलाई लाग्छ प्राय जसो हामी थोरै गिर्मी हुन्छौं किनकि हामीले स्प्याम मार्क गरिएको अनुभव गरेको हुन सक्छ र अरूलाई स्पामको रूपमा मार्क गर्न थोरै ट्रिगर खुसी पाउँदछौं। यस प्रकारको चीजले व्यवसायलाई नोक्सान गर्न सक्दछ; धेरै समय सम्म। मलाई सामग्री सेवामा मलाई बेच्न कोशिस गरिरहेको कसैको हिजो रात मैले एक चिसो ईमेल पाएँ, मैले सुरुमा यसलाई स्पामको रूपमा मार्क गरिरहेको छु, तर म आफैं यो गर्न आउन सक्दिन। उसको कुनै सदस्यता रद्द लिंक थिएन, कि त। मैले केवल औंल्याए र भने, "होईन, धन्यवाद।" मलाई लाग्छ हामीले फिशि स्प्याम बीचको भिन्नतालाई पहिचान गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिहरू जसले भन्छन्, "यो नयाँ पूरक लिनुहोस्," वा "दिनबाट $ १,००० बनाउनुहोस्"; यी स्पष्ट स्प्याम हो, कुनै लक्ष्य छैन। मेरो विचारमा यदि एक विक्रेताले पर्याप्त अनुसन्धान गरेको छ भनेर जान्नको लागि कि तपाईं मार्केटिंगमा हुनुहुन्छ र तपाईंलाई ईमेल प्रदान गर्दछ मार्केटिंग सेवा प्रस्ताव गर्दै, यो ठीक छ। केवल निष्पक्ष हुनुहोस् र भन्नुहोस्, "होईन, धन्यवाद" र त्यसले गर्छ। ईमेल टाढा जाँदैछ, न त चिसो-कलिंग।